၉ မြန်မာ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ
၁၀ အစိုးရဝန်ကြီးဌာနများနှင့် အခြားအစိုးရဌာနများ
နဝတ ကို ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင် (နောက်ပိုင်းတွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး အထိ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ရာထူးတင်ခဲ့ပြီး၊ ၁၉၉၇ ဇူလိုင်လတွင်ကွယ်လွန်) ဦးစီးသည့် မြန်မာ့လက်နက်ကိုင်တပ်များ “ရှစ်လေးလုံးထကြွမှု ”ကိုနှိမ်နင်းပြီး အာဏာသိမ်းယူခဲ့သည့် ၁၉၈၈ စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ အာဏာသိမ်းယူခဲ့သည့်နေ့တွင် နဝတ သည် အမိန့်အမှတ် ၁/၁၉၈၈ ဖြင့် တပ်မတော်မှအာဏာလွှဲပြောင်းရယူခြင်း နှင့် နဝတအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းကြောင်း အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အမိန့်အမှတ် ၂/၁၉၈၈ ဖြင့် နဝတ သည် ၁၉၇၄ မြန်မာနိုင်ငံ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေ အောက်တွင် တည်ရှိကြသော “နိုင်ငံတော်အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများ” အားလုံးကို ဖျက်သိမ်းပစ်သည်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၉၇၄ အခြေခံဥပဒေအောက်ရှိ ဥပဒေပြုအဖွဲ့)၊ ဝန်ကြီးများကောင်စီ (ဝန်ကြီးများအဖွဲ့)၊ ပြည်သူ့တရားသူကြီးများကောင်စီ (တရားစီရင်ရေးအဖွဲ့)၊ ပြည်သူ့ ဥပဒေအကျိုးဆောင်များကောင်စီ (ရှေ့နေချုပ်ရုံး)၊ ပြည်သူ့စာရင်းစစ်များကောင်စီ (စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး)၊ ထိုနည်းတူစွာ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း၊ မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်နှင့်ကျေးရွာ ပြည်သူ့ကောင်စီများ ကို ဖျက်သိမ်းပစ်သည်။
နဝတ သည် ယခင်မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ (မဆလပါတီ)တွင် ဒုဝန်ကြီးများ၏အလုပ်တာဝန်များအစားထိုးခြင်း ကိုလည်း ရပ်ဆိုင်းသည့်အမိန့် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ (၁၉၇၄ မြန်မာ့အခြေခံဥပဒေတွင် “ဝန်ကြီးများကောင်စီ” သည် ဝန်ကြီးများအဖွဲ့အဖြစ်ဆောင်ရွက်သော်လည်း ဒုဝန်ကြီးများကို ဝန်ကြီးများ ကောင်စီ၏ တရားဝင်အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် မထားရှိခဲ့သည့်အတွက် နဝတ သည် တိကျသေချာစေရန် ယခင် မဆလ အစိုးရအတွင်းရှိ ဒုဝန်ကြီးများကို ဝန်ကြီးများနှင့်အတူထားရှိပြီး ရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။) အာဏာ သိမ်းသည့်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် နဝတ ၏အမိန့်များကို ၁၉၈၈ စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်ထုတ် လုပ်သား ပြည်သူ့နေ့စဉ်သတင်းစာ တွင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ နဝတ ၏ပထမဦးဆုံးဥက္ကဋ္ဌသည် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင် ဖြစ်ပြီး၊ နောက်ပိုင်းတွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ဖြစ်လာပြီး ဝန်ကြီးချုပ်လည်းဖြစ်သည်။ သူသည် ၁၉၉၂ ဧပြီလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ရာထူးမှဖယ်ရှားခံရပြီး၊ ထိုစဉ်ကဗိုလ်ချုပ်ကြီး နောက်ပိုင်းတွင်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ဖြစ်လာသည့် [သန်းရွှေ၊ (ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး)|သန်းရွှေ] မှ နဝတဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ဝန်ကြီးချုပ်ရာထူးများကို လွှဲပြောင်းရယူသွားသည်။ ၁၉၉၇ နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် နဝတ ကို ဖျက်သိမ်းပြီး နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ ဖြိုးရေးကောင်စီ အဖြစ် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ အများအားဖြင့် သို့မဟုတ် အားလုံးမဟုတ်သော စစ်အစိုးရ၏အဖွဲ့ဝင် အများစုသည် ဖျက်သိမ်းလိုက်သည့် နဝတအဖွဲ့ ထဲမှ အဖွဲ့ဝင်များပင်ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးကောင်စီ၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ (၁၉၈၈ -၁၉၉၇)
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစောမောင် ( ၁၈ စက်တင်ဘာ ၁၉၈၈ – ၂၃ ဧပြီ ၁၉၉၂ )
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ ( ၂၃ ဧပြီ ၁၉၉၂ – ၁၅ နိုဝင်ဘာ ၁၉၉၇ )
နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ၊ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ (၁၉၉၇ မှစတင်သည်)
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ ( ၁၅ နိုဝင်ဘာ ၁၉၉၇ - ၃၀ မတ်၂၀၁၁ ခုနှစ်အထိ )
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ ၊ နအဖဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမောင်အေး ၊ နအဖဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ၊ ဒုတိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ကြည်းတပ်
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရရွှေမန်း ၊ ကြည်း၊ ရေ၊ လေပူးတွဲစစ်ဦးစီးချုပ်
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန် ၊ ဝန်ကြီးချုပ်
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသီဟသူရတင်အောင်မြင့်ဦး၊ နအဖ၏အတွင်းရေးမှူး ၁ ၊ စစ်ထောက်ချုပ်
ဗိုလ်ချုပ်အုန်းမြင့် ၊ အဖွဲ့မှူး အထူးစစ်ဆင်ရေးအဖွဲ့ ၁ (ကချင်ပြည်နယ်၊ မန္တလေးတိုင်း၊ချင်းပြည်နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း)
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင် ၊ အဖွဲ့မှူး အထူးစစ်ဆင်ရေးအဖွဲ့ ၂ ( ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကယားပြည်နယ် )
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုကို ၊ အဖွဲ့မှူး အထူးစစ်ဆင်ရေးအဖွဲ့ ၃ ( ပဲခူးတိုင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်း)
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးသာအေး ၊ အဖွဲ့မှူး အထူးစစ်ဆင်ရေးအဖွဲ့ ၄ (ကရင်ပြည်နယ် ၊ မွန်ပြည်နယ် ၊ တနင်္သာရီတိုင်း )
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြင့်ဆွေ ၊ အဖွဲ့မှူး အထူးစစ်ဆင်ရေးအဖွဲ့ ၅ ( ရန်ကုန်တိုင်း )
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ဇော် ၊ အဖွဲ့မှူး အထူးစစ်ဆင်ရေးအဖွဲ့ ၆ (မကွေးတိုင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်)
ဗိုလ်ချုပ်လှဌေးဝင်း၊ တပ်မတော် လေ့ကျင့်ရေးအရာရှိချုပ်
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အေး ၊ စစ်လက်နက်ပစ္စည်းအရာရှိချုပ်
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရမြင့်အောင် ၊ စစ်ရေးချုပ်
ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့များ၊ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ မြန်မာ့အရေးဆောင်ရွက်သူများ၊ နိုင်ငံတကာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့၊ လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ နှင့် အခြားသောအဖွဲ့များ၏ အစီရင်ခံစာများတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ချိုးဖောက်မှုများကို အသေးစိတ်ဖေါ်ပြထားသည်တို့မှာ -
ကလေးစစ်သားများစုဆောင်းနေခြင်းအတွက် အကြောင်းပြချက်များထဲမှတစ်ခုမှာ တစ်နိုင်ငံလုံးကို ပိတ်ဆို့ ထိမ်းချုပ်ထားနိုင်မည့် စစ်တပ်ဖြစ်ရန် စစ်သား ပို၍ များများလိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ တစ်သီးတစ်ခြား နှင့် အခွင့်ထူးခံသည့် မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်များအပေါ် မြန်မာအများစု၏မနှစ်မြို့ဖွယ် ခံစားနေရမှုများကို ပြသည့်အနေဖြင့် စစ်တပ်ထဲမဝင်ကြသည့်အတွက်ကြောင့် စစ်တပ်သည် တစ်ခါတစ်ရံ တွင်ကလေးစစ်သား အတင်းအကြပ်စုဆောင်းခြင်းဘက်သို့ လွှဲပြောင်းလုပ်ဆောင်ရသည်။
ကလေးများ နှင့် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခ ၊ အတွင်းရေးမှူးချုပ်၏အစီရင်ခံစာ၊ ၂၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၀၆ UN Doc. A/61/529 S2006/826
မြန်မာနိုင်ငံ ကလေးသူငယ်များနှင့် လက်နက်ကိုင်များ ပဋိပက္ခအပေါ် လုံခြုံရေးကောင်စီသို့တင်ပြသည့် အတွင်းရေးမှူးချုပ်၏အစီရင်ခံစာ၊ ၁၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၇ ၊ UN Doc. S/2007/666.
လုံခြုံရေးကောင်စီသို့တင်ပြသည့် ကလေးသူငယ်များနှင့်လက်နက်ကိုင်များပဋိပက္ခအပေါ် အတွင်းရေးမှူး ချုပ်၏အစီရင်ခံစာ၊ ၂၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၇ ၊ UN Doc. A/62/609-S/2007/757.
အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဝန်ကြီးဌာန စိုးသာ ၊ ဦး
သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ ဝန်ကြီးဌာန သောင်း ၊ ဦး
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ&oldid=649687" မှ ရယူရန်
၉ မတ် ၂၀၂၁၊ ၀၃:၀၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၉ မတ် ၂၀၂၁၊ ၀၃:၀၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။